Page2| Narayan Adhikari | Narayan Adhikari
Author: Narayan Adhikari
लिभरपुलमा नेपाल सम्झना – – नविन पोखरेल, लन्डन (कान्तिपुर)
कार्तिक ८, २०७२- विनाशकारी भूकम्पको ६ महिना बितिसक्दा पनि बेलायतीलाई नेपालको चिन्ताले छाडेको छैन् । उनीहरु त्यो हृदय विदारक घट्ना अझै झल्झली सम्झन्छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर प्रत्यक्ष सहयोग गरि फर्किएका बेलायती सोमबार साँझ लिभरपुल सहरमा नेपालको भविष्यबारे चिन्ता गर्दै थिए ।
नेपालभर दसैंको माहोल भइरहँदा लिभरपुल बस्ने बेलायती भने भूकम्पमा दिवंगतहरुलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न व्यस्त रहे । दीप प्रज्वलन गरेर नेपालको समृद्धिको कामना गरे ।
लिभरपुल जोन मोर युनिभर्सिटीस्थित जोन लेनन आर्ट बिल्डिङ प्रेक्षालय । बाहिर यत्रतत्र नेपाली झण्डा फहराइरहेका थिए भने हलमा नेपाल झल्कने चित्रहरु टांगिएका थिए । प्रदर्शनीमा भूकम्पपछि बेलायतीले कैद गरेका तस्बिरले विगत सम्झाइरहेको थियो । ‘वास्तवमा नेपालको चिन्ता लिने बेलायती अधिक रहेछन्,’ कार्यक्रममा सहभागी नारायण अधिकारीले भने ।
अर्का वक्ता नेप्लिज हार्ट फाउन्डेशन, बेलायतका अध्यक्ष एवं गोर्खा जिल्लावासी बुद्धिजिवी विकलचन्द्र आचार्यले पृथ्वीनारायण शाहको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै उनले भौगोलिक मात्र नगरि सांस्कृतिक एकीकरण समेत गरेको स्मरण गरे । Continue reading
सुशील कोइराला तिनै हुन् जसको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपाल संविधान जारी गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो। असोज ३, २०७२ साल साँझ ५ बजेर ५० मिनेट जाँदा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले ‘संविधानसभाद्वारा पारित एवम् संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमणित भएको संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए। संविधान घोषणा गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जुन भूमिका खेले त्यसबाट समग्र मुलुक एउटा जर्जर समस्याबाट मुक्त भई नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो। Continue reading
किन घटनाको सुइँकोसम्म पाउँदैन गुप्तचर बिभागले?
झन्डै तीन हप्ता पहिले युरोपको एउटा शक्तिशाली देश फ्रान्स आतंकवादी हमलाको निशानामा पर्‍यो। १२९ जनाको ज्यान गएको उक्त आतंकवादी हमलाले सम्पूर्ण युरोपलाई त्रसित बनायो। युरोपको केही देशहरुले सैनिक परिचालन गरे। बसेल्समा त भूमिगत ट्रेन केही दिन पूर्ण रुपमा बन्द नै रह्यो।
हुन् त फ्रान्स मा नै २०१५ को जनवरी मा नै चार्ली हेब्दोको कार्यालमा आतंकवादी हमला गरेको थियो। बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले त फ्रान्समा घट्ने घटना सुरक्षाकर्मीहरुको सुरक्षा सतर्कताको कारण बेलायतमा घट्नबाट बचेको बताए। यतिखेर युरोपमा सुरक्षाका जासुसी एजेन्सीहरु लगायत सेना-प्रहरीहरु हाई अलर्टमा रहँदै सम्भावित आतंकवादी हमला रोक्न कडा सुरक्षा निगरानी र शंकास्पदहरुलाई गिरफ्तार गर्न व्यस्त छ। पेरिसमा घटेको घटनासंगै फ्रान्सको गुप्तचर संथाहरु डि.जी एस. ई र डि.जी.एस.आईले घटना रोक्न नसक्नुको बारेमा ठूलो बहस केन्द्रित भएको छ। फेरि एक चोटी युरोप जासुसी संथाहरुको जासुसी र निगरानी थप मजबुत बनाउन लागि परेको छ।
नेपालमा यतिबेला भारतले गरेको अघोषित नाकावन्दीबाट मानवीय संकट उत्पन्न हुन लागिसकेको छ। नाकाबन्दीबाट नेपाली बजारमा मुख्यत औषधी, पेट्रोलियम पदार्थ इन्धन र खान पकाउने ग्यासको अभावले दैनिक जीवनयापनमा ठूलो संकट उत्त्पन्न भएको छ तर सरकार समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि वक्तव्यबाजीमा मात्र केन्द्रित छ। महिनौंदेखि स्कुल,कलेजहरु बन्द छन् मधेस पूर्ण रुपमा अशान्त छ। Continue reading